သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်, ရန်ကုန်. သွားဘက်‌ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသ
ⓘ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်, ရန်ကုန်. သွားဘက်‌ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ သွားဖက်ဆိုင်ရာ ..
ⓘ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)
သွားဘက်‌ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်ကို သွားဖက်ဆိုင်ရာဆေးပညာကျောင်းအနေဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဆေးပညာဌာန လက်အောက်ခံအဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ တက္ကသိုလ်များ အက်ဥပဒေအရ သွားဘက်‌ဆိုင်ရာဆေးကောလိပ် အဖြစ် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ဆေးတက္ကသိုလ်၁ ရန်ကုန် အနီးတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သွားဖက်ဆိုင်ရာဆေးပညာဘွဲ့ Bachelor of Dental Surgery - BDSကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် သွားဘက်‌ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် အဖြစ်ပြောင်းလဲ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကာ သွားဘက်‌ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်မန္တလေး မဖွင့်လှစ်မီ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ခုတည်းသော သွားဘက်‌ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်အဖြစ် တည်ရှိခဲ့သည်။ သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာကောလိပ်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစ၍ ရန်ကုန်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သံသုမာလမ်းတွင် ကျောင်းဝင်းအသစ်နှင့် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရာ အဆောက်အဦအသစ်များ၊ ဆေးပညာရပ်အသစ်များ၊ ကျွမ်းကျင်သောသွားဆရာဝန်အသစ်များဖြင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ပြည့်စုံသောတက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၃ ထပ်အဆောက်အအုံသစ်နှင့် ကုတင် ၅၀ ဆံ့ မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ကုသသင်ကြားရေးဆေးရုံကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများသင်ကြားခြင်းသာမက အထွေထွေ သွားဘက်ဆိုင်ရာဒီပလိုမာ ကဲ့သို့သော ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများလည်း သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသည်။ ယခင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစ၍ ပါရဂူဘွဲ့များကိုသင်ကြားပို့ချပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာ၏ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းကို ၂၀၀၀-၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အတည်ပြုမှုဖြင့် စတင်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
သွားဘက်‌ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်ရန်ကုန် မှ ပေးအပ်သော ဘွဲ့များမှာ သွားဖက်ဆိုင်ရာဆေးပညာဘွဲ့ BDS၊ မဟာဘွဲ့ MDSc နှင့် ပါရဂူဘွဲ့ DrDScများဖြစ်ကြပြီး ဒီပလိုမာဘွဲ့များအနေဖြင့် သွားဖက်ဆိုင်ရာဆေးပညာဒီပလိုမာ DipDSc နှင့် သွားဖက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဒီပလိုမာ DDT တို့ဖြစ်သည်။
Wikipedia: သွားဘက်ဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)